IPIPA / SOPA: Isimahla njani isiQulatho esinokusibulala | Martech Zone
IPIPA / SOPA: Ungasibulala njani Umxholo wasimahla
NgoLwesithathu, nge-18 kaJanuwari 2012 NgeCawa, ngoSeptemba 30, 2012 Douglas Karr
Iinkampani ezininzi zizenza mnyama iisayithi zazo ngeenzame zokulwa iProtect IP (PIPA) / SOPA Act ephantsi kovavanyo apha eUnited States. Endaweni yokukhwela enqwelweni kwaye ndivale indawo yam, ndicinge ukuba kungayakha ngakumbi indlela endiza kuphendula ngayo kuwe.
Sinezithuba ezingaphezu kwe-2,500 zeblogi Khuthaza Itekhnoloji enceda iiarhente kunye nabathengisi kwihlabathi liphela. Asikaze sihlawulise nawuphi na umxholo wethu, kananjalo ngekhe. Xa simisiwe, sihlala sithatha ixesha lokujonga kwakhona imveliso okanye ibali-kwaye siyithumela ulwazi ngaphandle kweendleko. Sinamanqaku amangalisayo avela kwiinkampani ezazisithi kuphela kwebhlog ethathileyo kwaye ikhokelele ekuvezeni okubonakalayo kunye nokukhula kwezixhobo zazo.
Sikwigama lokuqala nesininzi kubuchwephesha nakumashishini onxibelelwano noluntu kuba sinomdla wokunceda. Ngelixa ezinye iiblogi zithanda ukukrazula inkampani okanye itekhnoloji, uyakufumanisa ukuba iiposti zethu zixhasa kakhulu. Sifuna ukuba uphumelele. Sifuna ukuba uphumelele ngezisombululo. Sifuna ukufumana ezo zisombululo.
Ezinye iinkampani ziyasixhasa ngenkxaso-mali. Zoomerang (ngoku eyiSurveyMonkey) yayingumxhasi wethu wokuqala, a Isoftware yasimahla kwi-intanethi oko kuphucule ngokubhala kwethu kunye nokunxibelelana nabafundi bethu. UDelivra yi inkampani yentengiso ye-imeyile obonelela ngomxholo kunye nophando kubathengisi be-imeyile. Ekunene kwi-Interactive Khokela isisombululo sokuthengisa esizenzekelayo osincedayo ukuba siqonde ukuthengisa kubathengi.
Ngabaxhasi bethu kunye nabathengisi, sikwazile ukubamba indawo ipodcast yentengiso, siphuhlisa incwadana yeendaba ye-imeyile, siqale ukuphuhlisa iividiyo kwaye siyaqhubeka nokunyusa amava kwindawo yethu. Sinefayile ye- sicelo se sithuthi kanye ngekona! IiWebinars zikuluhlu lwethu olufutshane ngokunjalo. Yonke loo nto isimahla kuwe-abafundi bethu. Ngelixa singenzi nzuzo kwibhlog ngokuthe ngqo, imali ityalwe ukunceda nina. Ewe kunjalo, siyaxhamla ngokuba nebhlog yethu yokuqala ... kodwa ngethemba lokuba nawe uyayenza.
Namhlanje, besinentlanganiso nabameli bethu baseIndiana ukuxoxa ngezinto ezisixhalabisayo Khusela isenzo se-IP kunye ne-SOPA. Ngelixa iinkokeli beziphendula, khange bathethe nokuba ummeli wethu uyalixhasa kusini na ibhili. Nazi ezinye iinkcukacha ezongezelelweyo- kodwa nceda ufunde amanqaku am apha ngezantsi kunye neenkxalabo zam.
Ngokubhekisele kubameli bethu, ukuvimba kwe-DNS kugqithisiwe kwaye kufuna umntu wesithathu ukuba abone ukuba uyayithintela na le ndawo. Iverbiage iyame kwicala apho iisayithi ezinokuphela zivaliwe ziindawo zangaphandle. Andilogqwetha, ke andiqinisekanga ukuba yinyani na okanye hayi.
Into enokwenzeka kwangoko, ngaphandle kwenkqubo efanelekileyo, kukuba isiza esibonwa njengexhasa ukophulwa kwelungelo lokushicilela sinokususwa kwiinjini zokukhangela kunye nazo zonke iindlela zentengiso ezivaliweyo. Oku kunokwenzeka ngaphandle kwesaziso kwaye ngaphandle kwesakhono sokuzikhusela. Utyelelo lwethu lweinjini yokukhangela kunye nengeniso yethu ligazi lobomi elivumela le bhlog ukuba iqhubeke nokwanda. Ngamanye amagama, ukuba iqumrhu elinobunzima kwi-savvy esemthethweni enqwenela ukuya emfazweni nomxholo esabelana nawo… ibhlog yethu inokukrwitshwa ekufeni kungabikho sibonelelo.
Ndiqinisekisiwe emnxebeni ukuba oku akunakulindeleka, ukuba sizokwazi ukufumana ukumelwa kwaye silwe nomcimbi. Nantsi ingxaki… ethatha ixesha nemali endingenayo njengeshishini elincinci. Ke, kunokuba ndilwe, kungangcono ukuba ndiyisonge indawo kwaye ndibuyele ndisebenze kwinkampani enkulu. Kuyothusa oko.
IWashington sisixeko esigcwele ngamagqwetha. Rhoqo abakhumbuli ukuba abo kuthi ngaphandle kwemithombo yomthetho abafumani ukuzikhusela ngokwaneleyo. Ngokoluvo lwam, yile miThetho yeProtect IP kunye ne-SOPA ebhalelwe ukuyenza. Zisisixhobo seshishini elifayo… okokugqibela ukuphefumla ukuzama ukuthintela okungenakuphepheka. Isifaniso endasinikezelayo yayingunovenkile owayesala ukufaka izitshixo emnyango wabo. Kuba abanakho ukuqonda ukuba bangazikhusela njani, ngoku bacela urhulumente ukuba abagade.
Andibhali oku nje ngombono omnye webhlog. Sinika umxholo kunye nolindelo lokuba ilungelo lethu lokushicilela liyahlonitshwa. Ngamanye amaxesha bekungekho kwaye ndithathe inyathelo. Ndikwazile ukuvimba iisayithi, ukuzixela kwiinkqubo zentengiso, kwaye ndinezinye iinkampani- njengeenkampani zeefoto zesitokhwe- ezineepokotho ezinzulu ezilandela zona. Oko kuthetha ukuba u-ol 'Doug omncinci ukwazile ukuthintela ulwaphulo-mthetho kwaye alwe nalo ngaphandle kwemfuneko yokuba urhulumente abandakanyeke. Ewe kunjalo, oku akukho malunga nepropathi yam yobukrelekrele nangona kunjalo- imalunga nomdlalo bhanyabhanya kunye nerekhodi lokuwohloka kwemboni.
Kubuhlungu. Kulusizi ukuba iinkokheli zethu zopolitiko ziyacinga ngokwenza oku. Eyona nto imbi ngakumbi kukuba a yedemokhrasi inkokeli, UChris Dodd, ngoku uyinkokeli yalo mkhosi oza kutyumza eyona nto iphambili kwi-Intanethi-ukukwazi ukwabelana ngolwazi ngokukhululekileyo. Lo mthetho uyilwayo uza kuxhobisa ngakumbi abo baneepokotho ezinzulu… kwaye ususe ithuba kwabangenamandla. Iya kuchaphazela wonke umsebenzisi okwi-Intanethi, kubandakanya nawe.
Nceda uthathe ixesha lokufunda iinkcukacha ezintle kwaye uqonde ukuba ziya kukuchaphazela njani, umxholo wakho kunye neshishini lakho. Awudingi ukuba ngumMelika, i-Intanethi ayinayo imida esinokuthi siyinyanzele… kwaye abo bangaphandle kwe-United States emngciphekweni omkhulu kunathi. Funda ngakumbi kwi Misa uCensorship yaseMelika.
Uxanduva lwethu kwezeNtlalo kwiMidiya yoLuntu
Jan 18, 2012 kwi-2: 22 AM
Amagqabantshintshi akho athi “Endaweni yokulwa, kungangcono ukuba ndisonge indawo kwaye ndibuyele ndisebenze kwinkampani enkulu. Kuyothusa oku. ”
Ndicinga ukuba ubethe isikhonkwane entloko apho.
Mhlawumbi ndikhetha kancinci njengomnini weshishini elincinci, kodwa yonke into endiyibonayo kwezopolitiko kwibhodi iyasikhuthaza ukuba sithathe umsebenzi njenge-cog kwinkqubo enkulu. Kuncinci inkuthazo kubantu baseMelika ukuba babuyele kwiingcambu zethu zeshishini kwaye i "American Dream" iguqulwe yaba luhlobo oluthile lwe "package". Amashishini amakhulu afumana i-bailouts ngelixa amashishini amancinci ehlala engenakho ukufumana imali mboleko kule mihla.
Yonke loo nto ithi, iZenzo ze-SOPA kunye ne-PIPA zibonakala zilungile ngokuhambelana noko. Ndiyathemba ukuba bobabini badutyulwe ngokupheleleyo, kodwa ukwazi amagqwetha eWashington, ayizukugqibela ukuva ngolu hlobo lweZenzo.
Cinezela kumzalwana, kwaye ugcine ukwenza le uyenzayo.
Jan 18, 2012 kwi-11: 41 AM
Amagqabantshintshi kaBrian atyhila into ebisenzeka kuthi
ilizwe kangangeminyaka eli-150 edlulileyo, oko kube yimizamo enkulu
izinto ezinje ngurhulumente, ukulawula ubomi bezinto ezinje
Akakwazi ukuzikhusela. Urhulumente wethu wenze iinkqubo zentlalo ezisisiseko
Ususe naluphi na uluvo loxanduva lomntu kunye nenkuthazo yangaphakathi
kubantu ababangela ukuba baxhomekeke kakhulu kwinkqubo ezoyikayo
Ukungonwabi okanye ukwenzakala kubenza bangashiyi (iiveki zethu ezingama-79 ubude
Inkqubo yeinshurensi yengqesho ngumzekelo ogqibeleleyo). Urhulumente wethu
ngokuthe chu kodwa ngokuqinisekileyo uthatha amanyathelo okuphelisa ukurhweba ngo
ukuthatha imbuyekezo enokuthi ibambelele kubantu abathile (ngerhafu,
imimiselo, ubusoshiyali, nangaphezulu) nangokwala ukwamkela ukuba kunjalo
Enye yezinto nje ezimbalwa eziye zavumela iMelika ukuba ikhule ibe lihlabathi
amandla ukusuka ekuqaleni kwayo ukuya kwinkulungwane yama-20.
Jan 18, 2012 ngo-12: 29 PM
Iimpikiswano ezinkulu, zenziwe kakuhle. I-SOPA kufuneka imiswe.
Jan 18, 2012 ngo-6: 17 PM
Misa “SOPA” kulungile. Indenza ndizibuze ukuba ngubani, yintoni kwaye kutheni le nto isenzeka- Ngubani kanye kanye oxhasa iSOPA?
Ndiza kukuxelela abantwana… konke malunga nento enye “ULAWULO”